MicroG YouTube Vanced ngwa Download | Best égwu N'ihi mobiles
Download ọhụrụ version of MicroG YouTube Vanced ngwa faịlụ
MicroG YouTube Vanced ngwa Download: hey okorobịa, ị na-achọ ngwa ọdịnala na-ekwe ka ndabere playback na ad igbochi na YouTube? Ọ bụrụ otú ahụ, mgbe i rutere na nri page. Na nke a nkuzi, anyị ga-egosi gị otú ibudata YouTube Vanced ngwa na android ekwentị na Wụnye.
Anyị na-ebe na YouTube Vanced ngwa. anyị niile na-ekweta na mgbasa ozi bụ otú manụ na-na anyị niile na-achọ na-egwu ọkacha mmasị songs na Youtube mgbe anyị nkata na enyi, egwu egwuregwu na anyị na ama.
M nwere ozi ọma n'ihi na ị. The YouTube Advanced ngwa na-ahapụ ị na-egwu YouTube videos na ndabere. Ọ na-awade ike igbochi mgbasa ozi.
The YouTube Vanced ngwa bụ a gbanwetụrụ version nke ukara YouTube ngwa. na mbụ, ọ na-akpọ iYTBP – Agbara YouTube Background n'ụdị.
Gịnị bụ YouTube Vanced:
YouTube Vanced bụ a gbanwetụrụ version nke ukara YouTube ngwa. na mbụ, ọ na-akpọ iYTBP – Agbara YouTube Background n'ụdị. Ọ na oru site Master_T. Ọ bụrụ na ị na-na na na-agbalị modul, ị na-na na na-agbalị niile atụmatụ nke YouTube Vanced. Echiche nke Youtube Vanced si YBP.
YouTube Vanced ngwa awade ịtụnanya atụmatụ dị ka ad igbochi, ndabere playback, na ndị ọzọ. Anyị na-na-akọrọ ndị ọzọ na atụmatụ nke ngwa a n'okpuru
na-atụ aro: Download Kechioma Patcher na ibudata GbWhatsapp.
Akụkụ nke Youtube Advanced ngwa:
mgbasa ozi Block: – Mgbasa ozi igbochi feature-enye ohere onye ọrụ na-ekiri video enweghị manụ na mgbasa ozi.
Gee egwu na-akụ n'okirikiri: – Ọ na-ekwe ka onye ọrụ na-ege ntị songs mgbe Youtube ngwa ebelata.
PIP mode (Foto dị na foto a mode): – Foto dị na foto a mode na-akpọ PiP mode. The PiP feature-enyere a ọrụ nche videos na-ese n'elu mmiri na ihuenyo kama na gbawara n'etiti mode. Videos na-Switched ebelata nsụgharị mgbe na-eme nchọgharị na ndị ọzọ ngwa ọdịnala.
video mkpebi: – YouTube Vanced ngwa na-enye ohere ọrụ iji họrọ ma ọ bụ ka a ọkọlọtọ video mkpebi na-ekiri vidio na Youtube.
Ị nwere ike mbugharị na niile smartphones.
isiokwu: – The Vanced ngwa nwere ọtụtụ imewe nhọrọ na nwere ike ịgbanwe anya ma na-eche nke ngwa.
Megharịa video: – Ị nwere ike igwu a video n'elu na n'elu ọzọ. Dị nnọọ ka ndị video na megharịa mode.
video Speed: – Ị nwere ike ịgbanwe video playback ọsọ.
Ọ bụghị ya oké ngwa? Anyị na-akọrọ niile atụmatụ nke YouTube Advanced ngwa. Na-enweghị adịkwa ọ bụla ọzọ oge, anyị na-aga na-download ngalaba.
N'ebe a, anyị na-akọrọ ọhụrụ Youtube Vanced ngwa 2018. The ngwa bụghị dị na Play Store.
Non gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ: Download YouTube Vanced ngwa
Non gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ: – Download MicroG ngwa
Ka ịwụnye YouTube Advanced ngwa on unmanaged gam akporo ngwaọrụ
Ná nkebi a, anyị ga-egosi gị otú iji wụnye YouTube Advanced ngwa na a na-abụghị ndị gbanyere mkpọrọgwụ ngwaọrụ. Ee, unu nụrụ nri. Ị nwere ike iwunye na YouTube Advanced ngwa na unmanaged phones.
Na ikpe, mkpa ka ị ibudata ma wụnye ihe ọzọ ngwa akpọ MicroG. Ọ ga-enyere gị banye na gị Google Account. Enweghị n'ihu ado, anyị na-awụlikwa elu n'ime ndu.
nzọụkwụ 1: – Mbụ i nwere iwepụ na mmelite nke YouTube ngwa na-gbanyụọ akpaka update na Play Store.
nzọụkwụ 2: – Download YouTube Vanced ngwa si download ebe n'elu.
tupu etinyewe, ị ga-enyere ndị “Kwado amaghị isi iyi” nhọrọ ke gị ama ọnọdụ.
Na gị gam akporo ekwentị. Open ọnọdụ
Na Security Nhọrọ ọnọdụ, pịa ma tap.
Pịgharịa gaa na ala ruo mgbe ị na Unknown isi mmalite.
Ugbu a enweta na button Unknown isi mmalite.
A ịdọ aka ná ntị dialog jụrụ ma ọ bụrụ na ị chọrọ na-ekwe ka ngwa ọdịnala na-arụnyere si amaghị na isi mmalite.
Dị nnọọ pịa Ee ịnọgide.
nzọụkwụ 3: – Ugbu a wụnye YouTube version nke elu ngwa dị ka ndị ọzọ nkịtị ngwa faịlụ.
nzọụkwụ 4: – Download na wụnye MicroG ngwa na gị gam akporo ekwentị.
nzọụkwụ 5: – Osote, emeghe MicroG ngwa na banye na gị Google Account.
Atụmatụ: – Mgbe-egbu osisi n'ime akaụntụ gị. Mgbe ahụ họrọ gị họọrọ agba site n'ịhọrọ Settings> Advanced Ntọala> okirikiri nhọrọ ukwuu Settings.
Ọ bụ ya!! Ugbu a, i nwere ike na-ekiri vidio na-ege ntị music na-enweghị mgbasa ozi. E nwere ọtụtụ ihe atụmatụ. Explore ọ na-agwa anyị banyere ọkacha mmasị gị atụmatụ nke Youtube Advanced ngwa.
Download maka Magisk gbanye mgbọrọgwụ ngwaọrụ:
Ga-enyocha: Download Kingroot Download Spotify Premium
MicroG - YouTube Vanced site YouTube Vanced
version: 0.2.4-105-gf289a13-unyi (11675464)
emelitere ikpeazụ: September 12, 2018
Download MicroG - YouTube Vanced ngwa
SMS Blocker – Onyinye-eto eto 6.0.9 gam akporo ngwa
Diamond Diaries Saga ngwa Download | Best égwu N'ihi mobiles
DJI aga 4 .ngwa Download – Best Apps maka mobiles
Asphalt 8 Airborne MOD ngwa + data (Unlimited Money) download
Netflix (gam akporo TV) ngwa Download | Best égwu N'ihi mobiles
Free Pandora One Atụmatụ ngwa Download – Free Music & Audio APP maka gam akporo